Sagni xinno: Seenaa Wangaarii Matayi - Storybooks Minnesota
Sagni xinno: Seenaa Wangaarii Matayi A Tiny Seed: The Story of Wangari Maathai Una pequeña semilla: la historia de Wangari Maathai
Gaarren Baha Africa kessa kan jiruti intalti xinno tokko harmaee ishee wajjiin hojii qonnaa hojati. Maqan ishee Waangaarii dha.
Waangaariin diida bahuu jallati. Iddo masii warra isheeti lafa qotuu jaallati. Sagni xinno lafatti dhabde.
Yeroon isheen bayee jallattu eega aduun dhitee boda. Yeroo dunkanaayee fuduraalen arguu dadhaabade sa’an gara manaa ittideeman gahee jechuudha. Daandii qalloo qabattee laga ceetee deemiti.
Waangaariin muccayyo cimtu waantateef hataman gara mana barnoots deemitee. Abbaan fi harmeen ishee garuu Waangaariin akka hojii qonna irrati isaan gargaartu barbaadan ture. Yeroo waggaa torba geechu, obbolessi ishee hangafine, akkaa ishee gara manan barnoota deemitu warri ishee amansiisee.
Barumaa bayee jallate. Waangaariin akkuma kitaaba dubsituun bayee baratee. Qaphixi garii waan galmisisteef gara biyyaa Ameerikaati carra barnoota argate. waaee adunynaa baruf bayee barbadee turtee.
Yuniivarsiitii Ameerikaati Waangaariin waan bayee baratee. Biqlittotafi akka isaan ittiguddatan qo’atte. Akkaata isheen obbolessa ishee wajjiin Keeniyaati guddate yaadatte.
Adaduma barateen ummataa keeniyaa akka jallachaa turte barte. Akka isaan bilisaa fi mirqaana jiraatan barbaade. Addada bayee barachaa deemtuun biyyaa ishee jalachuu calqabde.
Yeroo barnoota ishee xummurtu, gara biyya ishee Keeniyaati debitee garu biyyi ishee bayee jijiramtee turte. Masiin bayeen umamaaniru. Dubartiin qoraan lafa cabsattu hinqabdu. Umanni bayee hiyoome ijoolen isaanis waannyaatan dhaban.
Waangaariin furmaata rakko kana beekte turte. Durbartonni akkamit akka muka dhaban barsistee. Dubartonni kuni mukken sana gurguraani mallqaa saniin namoota gargaran. Dubartonni kun bayee gammada turan. Waangaariin akka isaan abboman bayee isaan gargarte.
Turtii kessa, mukken harawn garaa daggalaati guddatan. Laggenis ya’uu calqaban. Ergaan Waangaarii Afrikaa hunda kessati tamsa’ee. Harra mukken miilyoonatu sangi Waangaarii irra margaa jiru.
Waangaariin bayee cimtee hojate. Ummani adunyaa hojii ishee ilaale badhasaa beekama tokko kennef. Innis Badhasaa Noobel Prizii Nagaa jedhama. Waangaariin dubartii ishee duraati Afrikaa kessa badhaasa kan arganchudhan.
Waangaariin bara 2003 du’an boqate garu yeroo mukken baredaa arginu mara ishee yadachuu nidandenya.
Noziibele fi rifeensa saddan Lukkuu fi Dhimillee Ilimo harre Sirba Sakiimaa Anaanis fi ogummaa Guyyan gara magaala deeme Lukkuu fi Risaa